Mpihira malagasy - Voahangy, Mamy Ralaivita, Mahaleo, tarika
ⓘ Mpihira malagasy - Voahangy, Mamy Ralaivita, Mahaleo, tarika, Ny Antsaly, JexMozika, Mara Carson, Bokini Ezra, Hantatiana, Hanta, Jean Emilien ..
RAZAFINDRAZAKA Voahangiharisoa no tena anarany. Renim-pianankaviana. Manan-janaka telo lahy izay samy efa raim-pianankaviana daholo. Efatra mianadahy no zafikeliny aminizao fotoana izao, dia i Mandresy 7 taona - Mendrika 5 taona - Ny Tsiky 3 taona - Iharena 2 volana sy tapany. Mpanankato teraka sy lehibe tao anatinny zava-kanto i Voahangy na avy aminny lafin-drainy na avy aminny lafin-dreniny satria samy hita tao aminny fianankaviany daholo na ny mpitendry zava-maneno sy ny mpamorona, na ny mpilalao teatra na mpihira.
Mamy Ralaivita dia mpihira sady mpamoronkira. Fony izy 12 taona dia nanangana tarika, vokatry ny nofinofy niarahana taminireo mpiray tam-po aminy sy ireo namany nandritra ny fialantsasatra indrindra indrindra. Taminizany fotoana izany no nitsangananny tarika "Zanaki Dada" 1974 ary maro aminireo hirany taminizany no naveriny aminny raki-kira navoakany aminizao fotoana. Maro ny mahatsiaro ny fandraisany anjara tao aminny Radio Televiziona Malagasy ka ny tapany voalohany dia niarahany taminny tarika Mahaleo. Taty aoriana kely dia nihira irery izy ka namoaka ny "Avereno aminay", izay nahazo ny ...
Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika mpihira iray avy ao Madagasikara. Taminny taona 1972, nandritra ny tolonny mpianatra no niforonanny tarika izay ahitana ani Dama, Dadah, Bekoto, Charles, Nonoh, Fafah ary Raoul. Nitondra tsioka vaovao teo aminny zava-kanto malagasy ity tarika ity taminizany, taminireo hirany maneho fanoherana ny tsy rariny, fitakiana zo, miventy ny fitiavana, ny fifankatiavana ary ny fahafatesana koa aza.
Ny Antsaly dia tarika maneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Ny vohikalany: Ny Antsaly dia tarika naneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Tsy latsa-danja koa anefa ireo tarika toy ny Kambana mirahalahy na koa ireo kingalahy aminny valiha tao Imerina sy tao aminny faritany Betsileo. Saingy, raha maro ny tarika mpihira taminny taonjato faha 20, ireo izay voalaza taty ahoriana fa naneho ny vakoka, no nandray kely taminny bà-kira vahiny nalaza tao aorianny ady lehibe faharoa, ny tarika Ny Antsaly dia nikiry nampiseho ny tena naha ...
Jex Mozika dia mpamorona, mpiangaly sy mpandrindra mozika ary mpihira. Natao ho an’ny sahalan-taona rehetra ny hirany. Hajaina RAVOAJA no tena anarany, mpikambana tao amin’ny tarika Tohy izy ny taona 1997 ka hatramin’ny taona 2001. Taorianizay izy dia nanao rap tao anatina tarika maro sy irery. Jex Ambiroa no anarany taminizany. Rehefa hitany ny lalana tiany ikopahana elatra dia nanomboka namoron-kira aminny gadony manokana izy. Nanomboka taminny taona 2003 izy no namorona hira aminny gadonny mozikanny fanahy na Soul fa aminny fomba fanaony manokana. Hajaina Jex indray no anarany taminizan ...
Mara Carson Rangers dia teraka taminny taona 1959 tany aminny faritra atsimoni Madagasikara. Maro ny karazana mozika nianarany, na bàn-kira vahiny na bàn-kira malagasy. Efa niara-niasa taminny Tarika Sammy sy ny tarika Lolo sy ny tariny izy. Taminny taona 1980 no niakarany an-tsehatra voalohany, ary ny taona 1981 no nitsangananny tarika Carson. Mbola nanohy ny fianarany momba ny "Lalàna" teny aminny Anjerimanontolo izy nandritra izany. Isanireo hira nahalalana azy taminizany ny Oram-pahavaratra 1982, Manina anao 1983, Fasana faharoa 1986. Ny taona 1988 izy no namorona sy nilalao ny feon-ki ...
Ny Bokini Ezra na Bokini Esdrasa dia boky ao aminny Tanakh sy ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana. Mitantara ny fiverenan’ireo babo an-tanidrazana voalohany avy any Babilona, ny nahavitana ny Tempoly vaovao ao Jerosalema, ny iraka notanterahin’i Ezra tao Jerosalema ary ny ezaka nataony hanadiovana ireo Jiosy nanambady vehivavy tsy Jiosy ny Bokin’i Ezra. Mampiseho ny fomba nampihamatanjaka ireo rafitry ny fivavahana jiosy niforona nandritra ny Fahababoana, dia ny sinagoga, ny famakiana ireo Bokinny Lalàna sy ny Bokin’ny Mpaminany, ny mpanoradalàna, ny Sinedriona, sns koa ...
I Hantatiana Ramamonjy dia mpihira malagasy teraka taminny 31 Oktobra 1982. 9 taona izy no namoaka rakikira voalohany: "La pluie, Fiderana, Faly aho." I Hantatiana dia nahazo ny "prix revelation gasitsara 1994" ary voafidy ho "vehivavy mendrika ny taona 1996"
Mpihira mivoy ny karazan-kira maro misy ao Madagasikara toy ny: hiran-drazana, tsapiky, banaiky, jihe, salegy. Mampiasa ny zava-maneno malagasy toy ny valiha, kabôsy, langoroany, katsà. Raha te hahalala misimisy kokoa dia jereo eto ny momba azy
I Jean Emilien dia mpihira, mpamoron-kira ary mpitendry zavamaneno malagasy. Teraka taminny volana Septambra 1963 tao Fianarantsoa. Malaza aminny fitendrena gitara na kabosy miaraka aminny farara i Jean Emilien.